Best iOS Photo Manager jikwaa Photos on iOS ngwaọrụ
> Resource> iOS> Best iOS Photo Manager jikwaa Photos on iOS Devices
"Ọ bụ na ihe ọ bụla kemfe iOS foto management software ka nwere ike ikwu? M na-eji m iPhone, iPod aka, na mgbe ụfọdụ iPad Obere na-foto. Ma e nwere ọtụtụ ndị photos na onye ọ bụla iOS ngwaọrụ na m mkpa iji ihe iOS foto faili jikwaa ha . Ọ bụla aro ga-kpọrọ ihe nke ukwuu. N'ihi! "
Ebe ọ bụla ị bụ, ọ bụ n'ezie-adaba adaba na-foto na iPhone, iPod aka, ma ọ bụ ọbụna iPad. Otú ọ dị, mgbe na-ewere foto, nwere ike ị chọrọ jikwaa photos na ndị a na iOS ngwaọrụ: ebufe na kọmputa maka inwekwu edezi / ndabere, ma ọ bụ nanị wepụ ha si gị iOS ngwaọrụ na ogbe onwe elu ohere. Agbanyeghị, na-eme ka ọ dị mfe ilekọta iOS photos, i kwesịrị iji a ọkachamara iOS foto faili. Ke ibuotikọ emi, m na-atụ aro ị na-agbalị Wondershare TunesGo, a na desktọọpụ ngwa jikwaa iOS photos. Na ya, i nwere ike ime ihe ọ bụla ị na-atụ anya na-eme mgbe ijikwa iOS photos.
Download kasị mma iOS Photo Manager ikpe mbipute inwe a na-agbalị!
Cheta na: Iche iOS Photo Manager maka Windows PC na Mac dị. Ị na-kwesŽrŽ download nri version maka kọmputa gị. MobileGo maka iOS (Windows) bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, na Windows Vista. TunesGo (Mac) akwado Mac OS X 10.6, 10.7, 10,8, 10,9, 10.10 na 10,11.
Gịnị ka nke a iOS Photo Manager enye gị ohere ime?
Mgbe wụnye TunesGo na kọmputa gị, dị nnọọ ẹkedori ya. Jikọọ gị iOS ngwaọrụ PC site eriri USB. Mgbe TunesGo egosipụta gị iPhone na isi window na ya niile media faịlụ ụdị depụtara na n'aka ekpe, pịa Photos na n'aka ekpe. Site ndabara, foto niile na-echekwa na 2 ebe: Photo Library & Igwefoto Roll.
Nyefee foto site na iOS Photo Library na igwefoto Roll na kọmputa ma ọ bụ onye mpụga ike mbanye. Ọ bụrụ na ị chọrọ mbupụ photos na kọmputa, dị nnọọ pịa Igwefoto Roll ma ọ bụ Photo Library na ekpe ikpughe foto niile. Họrọ photos na pịa Mbupụ na My Computer na Mbupụ na dobe-ala ndepụta. Chọta a ebe ịzọpụta ndị a exported photos.
Detuo foto site na kọmputa na-iOS ngwaọrụ. Mgbe ụfọdụ, ị pụrụ amasị idetuo ụfọdụ dị oké ọnụ ahịa foto gị iOS ngwaọrụ. Na nke a, pịa Photo Library na ekpe na pịa Tinye na-agagharị na kọmputa gị maka foto na ị chọrọ iṅomi. Mgbe mbubata ha gị iOS ngwaọrụ.
Wepụ foto site na iOS ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ onwe elu karịa ohere maka ọhụrụ photos, mgbe a na-edegharị photos na kọmputa, ị nwere ike họrọ ndị a na-achọghị photos na pịa Hichapụ wepu ha.
Ndị a bụ ihe nke a iOS Photo Manager nwere ike ime ka gị. E wezụga, i nwekwara ike ike foto albums na-etinye photos ha. Ugbu a iOS foto management software n'ụzọ zuru ezu na-akwado iPhone, iPod aka, na iPad na-agba ọsọ iOS 6 / iOS 5 / iOS 7.
Download iOS Photo Manager ikpe mbipute ugbu a!
Best iOS Njikwa Explorer maka Windows / Mac
Olee otú Hichapụ Photo Library si iPod
Olee otú Hichapụ Photos si iPad Igwefoto Roll
Apple si iOS 9 vs iOS 8
iOS 8 Update Nchọpụta nsogbu - Idozi iOS 8 Update Nsogbu Mfe